ချစ်ကြည်အေး: တရံတဆစ်၌ မြစ်တို့သည်....
ထားကို စတင်သိကျွမ်းခဲ့တာ ကျွန်မတို့တစ်ဘက်ခြံက မိတ်ဆွေများရဲ့သား မောင်မော်လွင် မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပါ။
ထားက မောင်မော်လွင်ရဲ့ သတို့သမီးလှလှကလေး။ ကလေးမက ဆံပင်ရှည်နက်နက်ဖားဖားကြီးနဲ့ လှတဲ့နွဲ့တဲ့အပြင် ကျက်သရေလည်းရှိပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဟာကို မျက်နှာနွမ်းကလေးနဲ့နော်လို့ ခင်ပွန်းသည်ကို တိုးတိုးပြောမိ ခဲ့သေးတာ။ ရှက်ရှာလို့နေမယ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်က။ ဒါမှမဟုတ် ခမျာ နွမ်းပါးလို့ အားငယ်တာများလား။ ကျွန်မကတော့ အတွေ့အကြုံများသူပီပီ အဲဒီမျက်နှာနွမ်းကလေးရဲ့နောက်မှာ တစ်ခုခုတော့ မြစ်ဖျားခံနေရမယ်လို့ အတတ်သိခဲ့တယ်။
ခါတိုင်းလိုပါပဲ။ ထားရဲ့ယောက္ခမ မေမြကျန်းမာရေးကြောင့် ကျွန်မခင်ပွန်းသည်ကို အိမ်ပင့်ဆေးကုနေကျမို့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထားနဲ့ပါ တဖြည်းဖြည်း ရင်းနှီးနွေးထွေးလာခဲ့တာ။ ကလေးမက မွန်ရည်သိမ်မွေ့ပြီး အားငယ်စိတ်အခံလေး ရှိနေပုံရတယ်။
မေမြတို့က မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ချမ်းသာတာရယ်၊ သားမောင်မော်လွင်ကလည်း ပညာတတ်ဖြစ်ပြန်တော့ နွမ်းပါးပြီး သာမန်ဘွဲ့ကလေး တစ်ခုနဲ့ မုဆိုးမသမီးထားကို သူ့သားနဲ့ မတူမတန်ဘူးထင်တာဟာ လောကမှာ ဖြစ်နေကျတွေထဲက ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမို့ မဆန်းဘူးပဲ ဆိုပါတော့။
တခါတလေ ထားက ကျွန်မခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ဆေးအိတ်ကိုဆွဲရင်း ကျွန်မတို့ခြံဘက်အထိ လိုက်ပို့တတ်တယ်။ အစမှာတော့ အတွင်းမီး အပြင်မယူရဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ခမျာမှာ ကြိတ်မှိတ်နေရှာပါရဲ့။ ကျွန်မတို့က သူ့အပေါ် သမီးကလေးတစ်ယောက်လို သဘောထားမှန်း သိလာတဲ့နောက်မှာတော့ သူမကလေးရင်ထဲက မျိုသိပ်ခံစား နေရရှာတာတွေ တစ်စတစ်စ ပွင့်အံလာ ခဲ့တော့တယ်။ ဖွင့်ချမယ့်ချတော့လည်း ကရားက ရေလွှတ်လိုက်သလို။ သူမရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်များ ကြိတ်မှိတ်နေခဲ့ ရပါလိမ့်မလဲ။ သူမပြောသမျှတွေကို မိန်းမသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ နှလုံးသားချင်းထပ်ပြီး နားထောင်ပေးခဲ့မိပါရဲ့။
“တစ်နေ့က ကျောင်းရေဗူးကလေးတွေ လျှော့ဈေးရတာနဲ့ သားနှစ်ယောက်အတွက် ၀မ်းသာအားရ၀ယ်လာမိတာ၊ အိမ်ရောက်တော့ မမညိုကလေးနှစ်ယောက်အတွက်ပါ ၀ယ်မလာရကောင်းလား၊ ကိုယ့်ကလေးတွေအတွက်ပဲ ကွက်ဝယ်လာရသလားတဲ့ မေမြက ဆူလိုက်တာ အန်တီခင်ရယ်၊ ထားလေ ရိုးရိုးသားသား မေ့သွားခဲ့တာပါ၊ တမင်လုပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူး”
အေးချမ်းတဲ့ ထားမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီး ထားမညာဘူးဆိုတာ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။
“မမညိုဆိုရင်လေ သူ့သားနှစ်ယောက်ကို သူတို့အိပ်ခန်းထဲမှာ မုန့်ခိုးခိုးကျွေးတာ၊ ကစားစရာတွေဆိုလည်း သူ့ကလေးတွေအတွက်ပဲ ဝယ်ဝယ်လာတတ်တာ၊ အဲဒါတွေကျတော့ မေမြက သိရက်သားနဲ့ ဘာမှမပြောဘူး၊ သိလား အန်တီခင်”
“တီဗီဆိုလည်း အဲလိုပဲ။ သားတို့မှာ ဖွားအေ ကိုရီးယားကားကြည့်ချိန်နဲ့ မမညိုကလေးတွေ ဂိမ်းကစားနေချိန်တွေကို ပြီးအောင် စောင့်နေကြရတာ။ ဒါနဲ့ မနေနိူင်တဲ့ထားက ထားတို့အခန်းထဲမှာ သားသားတို့အတွက် တီဗီအသေးလေးတစ်လုံး သပ်သပ်ဝယ်ပေးဖို့ ကိုမော့်ကို ပြောလိုက်မိပါတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကိုမော်ဟာ မျက်စေ့မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ "ဟာ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ ထားရယ်" တဲ့လေ။ မ၀ယ်ပေးနိူင်လို့လည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့လေ။ ထားလည်း နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်တော့တယ်။ စိတ်ထဲတော့ မကောင်းလှဘူးပေါ့”
“မမညိုကျတော့ ကလေးတွေ ထမင်းဘူးထည့်တာကအစ သူ့သားနှစ်ယောက်ထမင်းဗူးထဲ အသားတုံးတွေ ရွေးထည့်၊ ထား သားတွေကျတော့ အရိုးအရင်းပဲ ထည့်ပေးတာ။ ကလေးအချင်းချင်း ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ကြပြန်ရင်လည်း ထားကလေးတွေရဲ့ အပြစ်ပဲ၊ ကလေးချင်းတူတူ ထားသားတွေကိုပဲ မာန်လိုက်မဲလိုက်နဲ့။ ကြာတော့ ထား ရေငုံမနေနိူင်တော့ဘူး အန်တီခင်ရယ်။ ကိုယ့်ယောက်ျားဆိုတဲ့အားကိုးစိတ်နဲ့ ကိုမော့်ကို ပြန်ပြောပြမိပါတယ်။ ဒီတော့ ထားကပဲ အသေးအဖွဲကအစ သဘောထားသေး သိမ်လွန်းသတဲ့လေ”
တစ်နေ့တစ်နေ့ ထားပြောသမျှလေးတွေ ကြားကြားပြီး ကျွန်မတို့ ဇနီးခင်ပွန်းနှစ်ယောက်သား ထားအပေါ် သနားဂရုဏာ မသက်ဘဲ မနေနိူင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့မှာက သားသမီးတွေ အိမ်ထောင်ခွဲသွားပြီးကတည်းက နှစ်ယောက်ထဲ ဒီအိမ်ကြီးထဲနေ လာကြရတာ။ ဖြစ်နိူင်ရင် ထားတို့သားအမိတွေကို အနားမှာ ခေါ်ထားလိုက်ချင်ပါရဲ့။ ကလေးသံတွေ ဆူဆူညံညံနဲ့ဆို ကျွန်မတို့အိမ်ကြီး စိုစိုပြည်ပြည်တောင် ရှိလာနိူင်ရဲ့မဟုတ်လား။
ထားအမေကိုလည်း တခါတခါ ခြံထဲမှာ တွေ့လိုက်၊ တခါတလေ မေမြနောက်က ဈေးခြင်း ကိုင်လိုက်လာတာ တွေ့လိုက်နဲ့ တွေ့နေ ရတာ။ ထားအမေက လူကသာ ပိန်ပိန်၊ အရိုးအဆစ်သန်မာပြီး မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်း၊ နှာတံပေါ်ပေါ်နဲ့ နှုတ်ခမ်း တင်းတင်းစေ့ထားတတ်တာမို့ ငယ်ငယ်က မာနခဲမိန်းမချောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရတယ်။ ခုတော့လည်း သမီးနောက် လိုက်နေရင်း ခပ်ရိုင်းရိုင်းစကား ပုံခိုင်းရရင် ကျွန်ဝယ်ရာ အဆစ်ပါ ဆိုတာလို။
တခါတလေတော့လည်း ထားက ဘာမှမေးလို့မရအောင် ငိုချည်းနေတဲ့ နေ့တွေလည်း ရှိပါရဲ့။ ကျွန်မတို့မှာ သူ့ခေါင်းက ဆံစကလေးပွတ်သပ်ရင်း ချော့တာကလွဲလို့ ဘာမှ လုပ်မပေးနိူင်ပါဘူး။ ခမျာ ရှိုက်ကြီးတငင် ကလေးတစ်ယောက်လို ၀မ်းနည်းပက်လက် ငိုတတ်သေးတာ။
“အငယ်မချိုချိုကျတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဆိုပြီး အိမ်အလုပ် ဘာမှ မကူဘူး၊ သူ့အခန်းထဲမှာ ဘရာဇီယာတွေ၊ ထမီကွင်းတွေဆိုတာ ဒီအတိုင်း ပုံချထားခဲ့တာ။ ထားကမှ ယူမလျှော်ပေးရင် အလိုက်မသိရကောင်းလား၊ အိမ်မှာ တစ်နေ့လုံးနေလို့ ဒါလေးတောင် ကူမလျှော်ပေးချင်ဘူးလား ပြောသေးတာ။ ပြီးတော့ ချိုချိုက နေရာတကာ ထားနဲ့ ပခုံးချင်း လိုက်ယှဉ်နေတာ အန်တီခင်ရဲ့”
“ကိုမော့်ညီမအကြီး မမညိုကျပြန်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ အထည်ဆိုင်နဲ့ တွဲရက်ဖွင့်ထားတဲ့ အပ်ချုပ်ဆိုင်ကို ဦးစီးနေရတဲ့ အိမ့်စီးပွားရှာသူဆိုပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွေက သူနဲ့မဆိုင်ဘူး ထင်နေတာ။ အဲဒီတော့ အိမ်ဝေယျာဝစ္စအားလုံးဟာ အိမ်မှာနေတဲ့ ထားတစ်ယောက်တည်းရဲ့ တာဝန်ပဲပေါ့ အန်တီခင်ရယ်”
သားအငယ်ကောင်ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့တုန်းက အားနည်းနေတဲ့ထားကို ကျွန်မခင်ပွန်း အားဆေးသွားထိုးပေးခဲ့ရတာ။ ထားက နှုတ်ခမ်းလေးတွေတောင် ဖြူဖျော့လို့။ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ အိမ်အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲ တတ်နိူင်သလောက် နားနားနေနေ နေဖို့ အိမ်သားအားလုံးရှေ့မှာ ပြောပြခဲ့ရသေးတာ။ ကျွန်မ မှတ်မိနေတယ်။
တစ်ရက်မှာ ကျွန်မတို့ နေ့လည်ခင်းလက်ဘက်ရည်လေးသောက်နေတုန်း ထား ရောက်ချလာပါရော။ မျက်နှာကလေးက မို့အစ်အစ်နဲ့ နှာသီးဖျားလေးတွေ နီနေတာကြောင့် တစ်ခုခုဖြစ်ပြီး ငိုခဲ့ပုံရတယ်လို့ အတတ်သိလိုက်ပါရဲ့။
“အန်တီခင် ကိုဇော်လေ သိလား၊ မမညိုတို့ ထွက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကဆိုင်ကို သူလည်း ထွက်ချင်တယ်။ ဒါကို ကြည့်ကောင်းအောင် မောင်နှမတွေ မျှမျှတတ တစ်လှည့်စီထွက်ကြရအောင် အစ်ကိုကြီးပဲ ပြောပေးပါဦးဆိုပြီး ကိုမော့်ကို ဗိုက်ငှားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထားပဲ လူဆိုးဖြစ်ရတယ်။ ထားကပဲ ဒီဆိုင်ကို မမညိုတို့တစ်ဦးထဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်နေတာကို မရှုစိမ့်လို့ ကိုမော့်ကို ပြောခိုင်းသလိုလို”
မောင်ဇော်လွင်ဆိုတာက မောင်မော်လွင့်ညီ၊ မောင်မော်လွင်လိုတော့ မလိမ္မာလှဘူး၊ သူတို့နေတဲ့ အိမ်ကြီး၊ မိဘက မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးထားတဲ့ အဲဒီအိမ်ကြီးကိုတောင် ပေါင်ပြီး လောင်းကစားလုပ်တယ်ဆိုလား ကြားလိုက်မိသေး။ မောင်ဇော်လွင်ဟာ သူလိုချင်တာ တစ်ခုခုရှိရင် အစ်ကိုမောင်မော်လွင်ကို ရှေ့ကထွက်ခိုင်း၊ သူက နောက်ကနေ အသာမျှောလိုက်တတ်သူ၊ အခွင့်အရေးရတော့မှသာ ရှေ့က တက်ယူတတ်တဲ့သူ။
“ခက်တာက ကိုမော်က သူ့ဆွေမျိုးလုပ်သမျှ အကောင်းချည်း ထင်တဲ့သူ အန်တီခင်ရဲ့။ ထားက သူတော်စင်မဟုတ်တော့ အမြဲ သည်းခံမနေနိူင်ဘူး။ မခံနိူင်လို့ ထေ့တာငေါ့တာလေးတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ယောင်းမတွေနဲ့ စစ်အေးတိုက်ပွဲဖြစ်ရရော။ ကြာတော့ စိတ်ညစ်လာတယ်။ စိတ်ကို ရှင်းရှင်းလေးထားချင်ပေမဲ့ သူတို့က လာလာချိတ်နေတာကို အမြဲတမ်း ပြန် ပြန်ဖြုတ်ချ မနေနိူင်ဘူး။ ပြန်ချိတ်မိလိုက်ချင်တယ်။ ထားလည်း လူသားပဲ၊ ထားမှာလည်း စိတ်ကလေးတော့ရှိသေးတာပဲ ဆိုတာမျိုး ပြလိုက်ချင်သေးတာပေါ့ အန်တီခင်ရယ်”
ကျွန်မ ဘာများပြောနိူင်မှာလဲလေ။ ထားလာတဲ့အခါတိုင်း ပြောပြသမျှတွေနားထောင်ပြီး ထားဘက်က ရပ်တည်ပေးချင်မိတဲ့ စိတ်တွေ ကျွန်မရင်ထဲ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာတော့တာပါပဲ။
“အိမ်သားတွေရဲ့ စားရေးသောက်ရေး၊ နေ့စဉ် ဝေယျာဝစ္စတွေကို ထား လုပ်နိူင်ပါတယ်။ အမေလည်း ကူလုပ်ပေးနေတာ ဆိုတော့လေ။ အိမ်အလုပ်ပင်ပန်းတာကိုခံနိုင်ပေမဲ့ ထားအပေါ် မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ အကောင်းမမြင်တာတွေကိုတော့ ထား မခံစားတော့နိူင်ဘူး။ ထား ခုလိုခံစားနေရတာတွေ အမေသိမှာလည်း စိုးတယ် အန်တီခင်”
ထားအမေက မသိဘဲနဲ့တော့ နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ရာက ကြီးလာတာပဲဟာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထား စိတ်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီး ကိုယ့်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ပြန်ပြောပြရတယ်။ ကျွန်မတို့တုန်းကလည်း ဦးသော်ဇင်တို့ဘက်က သဘောမတူကြပါဘူး။ သူတို့အမျိုးက ပညာတတ်မျိုးရိုး၊ ကျွန်မတို့ဘက်က ကုန်သည်မျိုးရိုး။ သူတို့ဘက်က ပညာတတ်မှ အထင်ကြီးကြတာ။ ကျွန်မမှာ ယောင်းမတွေ ယောက္ခမတွေနဲ့ နှစ်တော်တော်ကြာ တည့်အောင်နေခဲ့ရတာပါပဲ။ ယောက္ခထီးက ကျွန်မကို ချစ်တာမို့ ဖြေသာခဲ့ရတယ်။ ခုနေပြန်ပြောရင် ဘာမှမဟုတ်သလိုပေမဲ့ ဟိုတုန်းကတော့ဖြင့် အတော်လေး ခါးခါးသည်းသည်း ခံစားခဲ့ရတာ။ လူဆိုတော့လည်း ကိုယ့်အပူကမှ မီးနဲ့တူတယ် ထင်တတ်ကြတာကိုး။ ဒီတော့ ထားလည်း ပုထုဇဉ်ပီပီ သူ့အပူကမှ ကြီးလှတယ်လို့ ခံစားနေမှာပါပဲ။
“ထား ဒီအိမ်ကြီးပေါ် စတက်လာကတည်းက ကိုမော်ရမဲ့အမွေတွေကို မက်လို့၊ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို မက်လို့ ကိုမော့်ကို လက်ထပ်တာလို့ မြင်နေကြတာ။ ကြည့်နေ အမွေရမှ နှစ်ဘက်မိဘနာမည်နဲ့ အမွေအားလုံး လှူကိုပစ်ဦးမှာ”
မခံချင်စိတ်ကလေးနဲ့ လက်သီးလေးဆုတ်ပြီးပြောနေတဲ့ ထားရဲ့ မာဆတ်ဆတ်ဟန်လေးက ကျွန်မမျက်လုံးထဲ စွဲနေခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေဆိုတာက လူသားအားလုံးကြိုက်ကြတာ၊ ငွေရဲ့ဖျားယောင်းမှုကို လွန်ဆန်ဖို့ ခက်တတ်ကြတာမို့ ငွေများ မမက်ပါဘူးဆိုတဲ့ ထားရဲ့ မာနအပြောလေးကို ကျွန်မက သဘောကျမိတယ်။ စားရတဲ့ကလေး ပိုငတ်တယ် ဆိုတာလို၊ ငွေဆိုတာကို များများစားစား မသုံးဖူးသေးလို့ မမက်တဲ့သဘောနေမှာလို့ ကျွန်မခင်ပွန်းသည်က မှတ်ချက်ချတယ်။
“ဒီနှစ်တွေထဲမှာ ထား ကိုမော့်ကို ခဏခဏပြောနေရတဲ့ စကားကတော့ အိမ်ခွဲနေကြအောင်နော်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပဲ။ ထား သူတို့နဲ့ အတူမနေနိူင်တော့ဘူး အန်တီခင်ရယ်”
ကျွန်မ သက်ပြင်းများသာ အကြိမ်ကြိမ် ချခဲ့မိတော့တယ်။ ဒီကလေးမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက လင်ရကံကောင်းပါရက်နဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့် မသာမယာဖြစ်နေရတာ။ ခု ကျွန်မကြားနေရတာတွေက တစ်ဘက်စကားကို တစ်ဘက်နားနဲ့ပဲ ကြားနေရတာလေ။ ဒီတော့ ကျန်တစ်ဘက်ရဲ့အသံကိုလည်း အခွင့်ရရင် နားထောင်ချင်မိပါရဲ့။ ဒါမှလည်း နှစ်ဘက်အကြား ကွာဟနေတာတွေရှိနေရင် အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေကောင်းပီသစွာ ရင်ကြားစေ့ပေးနိူင်မယ်လို့ ကျွန်မက ခပ်ရိုးရိုးပဲ တွေးတယ်။ ကျွန်မအမျိုးသား ဦးသော်ဇင်ကတော့ ထားကို သမီးလေးလိုချစ်တာမှန်ပေမဲ့ တစ်ပါးသူ မိသားစုတွေရဲ့ အိမ်တွင်းရေးမို့ ကြားမ၀င်စေချင်ဘူး။
တစ်နေ့တော့ ညိုညို့သားအကြီးကောင်လေးမွေးနေ့မှာ ကြာဇံချက်ချက်ပြီး ညိုညိုကိုယ်တိုင် ချိုင့်ဆွဲလာပို့တယ်။ ဦးသော်ဇင်က ကြာဇံချက် အင်မတန် ကြိုက်လှတာ။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မကလည်း အိမ်မှာ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲချက်ထားတာတွေ အဆင်သင့်ရှိနေတာနဲ့ ချိုင့်ထဲပြန်ထည့်ပေးရင်း ညိုညိုပြောတာတွေ နားထောင်ဖို့ အခွင့်ရခဲ့ပြန်တယ်။
“အန်တီခင်ရေ ညိုညိုတို့မယ် အစ်ကိုကိုလည်း မပြောရဲ၊ ယောင်းမကို ပြောပြန်ရင်လည်း သူ့ကိုပဲ ၀ိုင်းနှိမ်ကြတယ် ထင်မှာစိုးရနဲ့၊ ထားက ကလေးတွေကို အလိုလိုက်လွန်းတယ်။ ကလေးတွေက စာမလုပ်ချင်ဘဲ ဂိမ်းချည်း ကစားချင်ကြတယ်။ အတန်းထဲမှာ အဆင့်တွေလည်း မကောင်းကြဘူး။ သူ့ကလေးတွေကို ဆူဆုံးမရင်လည်း ထားက နည်းနည်းမှ မကြိုက်ဘူး အန်တီခင်ရယ်၊ ညိုညိုတို့ကလည်း အဒေါ်ပဲဟာနော် ကိုယ့်တူတွေကို ကောင်းစေချင်တာပေါ့”
“ကိုကိုမော့်ရည်းစားဟောင်းက ညိုညို့သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးလေ အန်တီခင်ရယ်။ အဲဒါ သူမို့အိမ်အလည်လာရင် ထားက တံခါးဆောင့်ပိတ်လား ပိတ်ရဲ့။ မီးဖိုထဲကနေ အိုးတွေခွက်တွေကို အသံမြည်အောင် တမင်လုပ်ပြီး မကြေနပ်ကြောင်း ပြလား ပြရဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အန်တီခင်ရယ်။ ညိုညို့သူငယ်ချင်းက ထားနဲ့ကိုမော် အိမ်ထောင်မကျခင် ကတည်းက အိမ်မှာ ၀င်ထွက်နေတဲ့ဟာ၊ ခုလို ကိုမော့်ရည်းစားဟောင်းကို အိမ်လည်လက်ခံနေတာကို ထားက မကြိုက်ဘူးလေ၊ ကိုမော့်အဆက်ဟောင်းကိုပဲ အရေးပေးပြီး တမင်မျက်နှာခေါ်ပြတာဟာ သူ့ကို ရွဲ့တာ၊ သူ့ကို ယောင်းမအဖြစ် လက်မခံတာလို့ ထင်နေတယ်”
“ညိုညိုတို့မှာ ဆိုင်ကတစ်ဘက်နဲ့မို့ အိမ်အလုပ်တွေ ထားကိုပဲ ပုံအပ်ထားရတာ။ သူ့ကို ယောင်းမမို့လို့ စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်လို့လည်း မေမြကို ဂရုစိုက်ဖို့ရော၊ အိမ်စားရေးသောက်ရေးပါ မျက်စေ့မှိတ်လွှဲထားတာပေါ့ အန်တီခင်ရယ်”
“ထားက အငယ်မချိုချိုနဲ့လည်း မတဲ့ဘူး။ အန်တီခင်သိတဲ့အတိုင်း ချိုချိုက အငယ်ဆုံးမို့ တစ်အိမ်လုံးက အလိုလိုက်ထားတော့ သူ့အ၀တ်တောင် သူလျှော်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ထားကို သူ့အစ်မတစ်ယောက်လို ချွဲနွဲ့ပြီး အကုန်ခိုင်းစားနေတော့တာ။ အဲဒါကို ထားက သူ့ပဲ အကုန်ခိုင်းတယ်၊ သူ့ပဲ ဗိုလ်ကျတယ် ဖြစ်ရော မလွယ်ပါဘူး အန်တီခင်ရာ”
ကျွန်မကြားချင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဘက်စကားကိုလည်း ကြားရပါပြီ။ သူ့ဘက်ပြောတော့လည်း သူ အမှန်လိုလို။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ထားအပေါ် သနားရင်းစွဲရှိတာမို့ လူသားပီပီ အားနည်းတဲ့ဘက်က၀င်ပြီး ရပ်တည်ချင်မိတာတော့ ၀န်ခံရမှာပါပဲ။
ထားတို့မိသားစု အိမ်ခွဲမဆင်းခင်တစ်ရက်က ကျွန်မတို့အိမ် ၀င်လာနှုတ်ဆက်သွားပါသေးရဲ့။ ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံကို ထိုင်ကန်တော့တာမို့ ကျွန်မတို့မှာ မျက်ရည်တောင်ကျမိပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော သူတို့မိသားစုအတွက်တော့ ၀မ်းသာလိုက်ရတာလေ။
ဒီလိုနဲ့ ဝေးသွားလိုက်ကြတာ မေမြနေထိုင်မကောင်းပြီး အသည်းအသန်ဖြစ်လို့ ထားတစ်ယောက် အနီးကပ်လာပြုစုတဲ့ အခါမှ ပြန်တွေ့ကြရတယ်။ မကြာပါဘူး၊ မီးစာကုန်ဆီခမ်းမို့ ထင်ပါရဲ့ ဆေးဝါးကောင်းတွေနဲ့ ကုနေတဲ့ကြားက မေမြတစ်ယောက် ဆုံးပါးသွားရှာတယ်။ မေမြဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် ရက်လည်တဲ့အထိ ထားတစ်ယောက် မျက်တွင်းချောင်ကလေးနဲ့ ဂျင်ခြေလည်အောင် ပင်ပန်းနေတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။
မေမြမဆုံးခင် ရှေ့နေနဲ့ အမွေကိစ္စတွေရှင်းကြတော့ သားသမီးလေးယောက်စလုံးကို ပိုင်ဆိုင်သမျှ လေးပုံအညီအမျှစီ ခွဲပေးခဲ့တာမို့ ကျွန်မတို့က ထားတို့မိသားစုအတွက် ၀မ်းသာရတယ်။ မေမြမှာက ရှေးစိန်တွေဆိုတာ မနည်းမနောကို ရှိခဲ့တာမို့ တစ်ပုံစီဆိုရင်တောင် ကာလတန်ဘိုးနဲ့ နည်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။
မေမြလက်က ကြံဆစ်လက်ကောက်ကြီးနှစ်ရံကို သူမသေခင် သူ့လက်ကချွတ်ပြီး ထားလက်မှာ ကိုယ်တိုင်ဝတ်ပေးခဲ့ရှာတယ်။ သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ညိုညိုနဲ့ ချိုချို့ကိုတောင် မပေးခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့အနားမှာ ချေးကလူ သေးကလူကအစ အနွံတာခံပြုစုခဲ့တဲ့ ချွေးမရဲ့မေတ္တာကို မေမြတစ်ယောက် မသေခင် သိသွားခဲ့ပုံပါပဲ။
မညိုနဲ့ ချိုချို သိတ်ကြေနပ်ပုံမရဘူးဆိုတာကို ရိပ်မိတဲ့ထားက ရက်လည်ကိစ္စပြီးလို့ ပြန်ခါနီးမှာ သူ့လက်က လက်ကောက်နှစ်ရံကို ယောင်းမနှစ်ယောက် တစ်ယောက်တစ်ရံစီ ချွတ်ပေးခဲ့လေတယ်။ ပစ္စည်းမမက်မောတဲ့ ထားရဲ့စိတ်ကလေးကို ကျွန်မဖြင့် ကြိတ်ချီးကျူးခဲ့ရသေးတယ်။ သူတို့အိမ်မပြန်ခင် ကျွန်မတို့ကို လာနှုတ်ဆက်တော့ ထားကပြောသွားပါသေးတယ်။
“အမွေက တစ်ယောက်ဘယ်လောက်ရမယ်တော့ မသိပါဘူး အန်တီခင်ရယ်၊ ကြည့်နေပါ ဒီအမွေတွေကို အလှူကြီးကို ပေးလှူပစ်ဦးမှာ၊ အန်တီခင့်ကို ဖိတ်လိုက်မယ်နော်။ အဲဒီတော့မှ ထား အမွေမက်လား မမက်လားဆိုတာ သူတို့ တစ်နေ့ သိမှာပေါ့လေ” တဲ့။ အံကလေးများတောင် ကြိတ်လို့။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ညိုညိုနဲ့ ချိုချိုတို့နှစ်ယောက်က အစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို အိမ်တန်ဘိုးရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံစီ ပြန်အမ်းလိုက်ကြပြီး အိမ်ကြီးကိုတော့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်အပိုင်ပဲ ထားလိုက်ကြတယ်လို့ ကြားတယ်။ ချိုချိုအိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ ဒီအိမ်ကြီးကို တစ်ယောက်ယောက်က ပြန်အမ်းယူမှာလား၊ နှစ်အိမ်ထောင်အတူတူပဲ နေကြမှာလားဆိုတာတော့ မသိနိူင်ဘူးရယ်။ ခုတော့ ချိုချိုလည်း ကျောင်းပြီးလို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကဆိုင်ကို တစ်လှည့်စီထွက်နေကြလေရဲ့။
အငယ်ကောင်ကိုဇော်ကတော့ ရတဲ့အမွေတွေနဲ့ လောင်းကစားပဲ ဆက်လုပ်နေပြန်ပြီလား။ အချိုးအချိတ်ပြောင်းပြီး လိမ်ပဲ လိမ္မာနေပြီလား မပြောတတ်ပါဘူး။ သူတို့အမေ မေမြမရှိတဲ့နောက် သားသမီးတွေက အိမ်အလာကျဲသွားတာမှ မလာတော့သလောက်ပါပဲ။ ထားနဲ့ကျွန်မတို့လည်း မတွေ့တာတောင် အတော်လေး ကြာခဲ့ပါပြီ။
“ဟိုမှာ မောင်မော်လွင့်မိန်းမလေး ထား မဟုတ်လား”
ကျွန်မတို့စားနေကျ ယိုးဒယားစားသောက်ဆိုင်လေးမှာ နေ့လည်စာစားနေရာက ခင်ပွန်းသည်ပြတဲ့ဘက် ကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်တယ်၊ ထားပဲ။ ထားကလည်း ကျွန်မတို့ကို မြင်သွားပြီး ကျွန်မတို့စားပွဲရှိရာ လျှောက်လာတယ်။
“အန်တီခင်နဲ့ အန်ကယ်သော် နေကောင်းကြတယ်နော်၊ ထားတို့ မတွေ့တာတောင် ကြာပြီ”
“ဟုတ်တယ် သမီး ထားရယ်၊ မေမြဆုံးပြီး တစ်ခါလား တွေ့ကြတယ်နော်၊ နေကောင်းရဲ့လား၊ မောင်မော်လွင်ရော၊ ထားတို့အမေရော”
“ထားတို့မိသားစု နေကောင်းပါတယ် အန်တီခင်၊ အမေက ဒီနှစ်ထဲ အတော်လေး မကျန်းမာချင်ဘူး”
“အေးလေ အသက်ကလည်း ရလာမှကိုး”
“ဟုတ်တယ် အန်တီခင်ရေ၊ အရင်ကလို အန်တီခင်တို့နဲ့ ခြံချင်းကပ်ရက်မဟုတ်တော့ အမေ့ကျန်းမာရေးအတွက် အပြင်အထူးကုတွေကိုပဲ အားကိုးနေရတယ်။ အန်တီခင်ရေ နောက်မှ ထား အိမ်လာလည်ပါ့မယ်နော်၊ ဒီမှာ သားသားတို့က ပက်ထိုင်းခေါက်ဆွဲစားချင်တယ်ဆိုလို့ လာဝယ်တာ။ ဒါက ထားတို့ အိမ်လိပ်စာ၊ ခု ကိုမော်က အိမ်မှာပဲ ရုံးခန်းဖွင့်ထားတယ်လေ အန်တီရဲ့။ အန်တီတို့ ကြုံရင်လည်း ၀င်ခဲ့ပါနော်”
ပြောပြောဆိုဆို လိပ်စာကပ်ပြားလေးပေးခဲ့ပြီး ခပ်သွက်သွက်လေးလှမ်းထွက်သွားတဲ့ ထားနောက်ကျောကို ကျွန်မ လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
ထားဟာ သူ့ဆံပင်အရှည်ကြီးကို ပုခုံးထိရုံလောက်ဖြတ်ပြီး အခွေလေးတွေ ကောက်ထားတယ်။ မျက်နှာမှာလည်း မိတ်ကပ်ပါးပါးလေး လိမ်းခြယ်ထားပုံရတယ်။ မှုန်ပြေပြေလေး။ ခုံမြင့်ဖိနပ်နဲ့။ လူးဝစ်စ်ဗစ်ထွန် လက်ကိုင်အိတ်နဲ့။ နားနှစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ဖျတ်ဖျတ်တောက်နေတဲ့ စိန်နားကပ်နဲ့။ ထားအပြင်အဆင်ဟာ အတော်ကို ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။ ထားစိတ်တွေရော ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလား….ကျွန်မ မသိနိူင်ဘူး။ ခုထိတော့ နှစ်ဘက်မိဘနာမည်နဲ့ အလှူကြီးပေးတာမျိုး ကျွန်မ မကြားမိသေးတာ အမှန်။ မောင်မော်လွင်လိပ်စာပါ ကဒ်ပြားလေးကြည့်မိတော့ အရင်အိမ်မဟုတ်တော့ဘဲ တကယ့်ကို လူချမ်းသာတွေမှနေတဲ့ အိမ်ရာမှာ။
အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ ထားကိုယ်တိုင်မောင်းလာတဲ့ကားလေးက ကျွန်မတို့ထိုင်နေတဲ့ ဆိုင်ရှေ့ ဖြတ်မောင်း သွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ထားက နေကာမျက်မှန်လေးတောင် တပ်ထားလို့။
“ထားတို့အလှူကျရင် ခြုံဖို့ဆိုပြီး တပြင်ပြင်လုပ်နေတဲ့ မင့်ပိုးပုဝါကြီး ဘီရိုထဲသာ ပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါတော့ကွာ”
ဦးသော်ဇင်က အဲသလို စနောက်တော့ ခါတိုင်းလို ကျွန်မ မပြုံးနိူင်ဘူး။ စိတ်ထဲ ၀မ်းနည်းသလိုလို၊ တစ်ဆို့ဆို့ကြီး ခံစားနေရတယ်။
ထားဟာ တကယ်ပဲ ငွေတန်ဘိုး နားလည်သွားပြီလား….
ငွေ ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ခြေခြေမြစ်မြစ်ကြီး သိသွားပြီလား….
အပေါ်ယံအသွင်သဏ္ဍန် ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အတူ ထားရင်ထဲက ခံယူချက်တွေပါ တစ်ပါတည်း တိုက်စားသွားခဲ့ပြီတဲ့လား။
အေးလေ လူတွေဟာ ပြောင်းလဲနေတတ်တာပဲ။ ထားလည်း လူတစ်ယောက်ပဲမို့ ပြောင်းလဲနိူင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ လက်ခံ ရမှာပေါ့။
ဦးသော်ဇင်က စကားတစ်ခွန်း ထပ်ပြောတယ်။ “စားရတဲ့ကလေးဟာ ပိုငတ်တယ်ဆိုတာ အမေကြီး လက်တွေ့သိပြီလား” တဲ့။ ခင်ပွန်းသည်ကို ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ထားဟာ အရင်က စားရကောင်းမှန်းမှ မသိခဲ့တာဘဲကိုး။
ဘယ်လိုပဲဆိုဆို တစ်နေ့မှာ ထားပို့လာမဲ့ အလှူဖိတ်စာတစ်စောင်ကို ကျွန်မရင်ထဲ တိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်နေမိသေးတာပါပဲ။
Vista Fri Nov 29, 03:00:00 PM GMT+8
good hta !!
rose of sharon Fri Nov 29, 03:20:00 PM GMT+8
ဝထ္တုလေးအဆုံးမှာ "ထားရယ်"....လို့ရေရွတ်မိလိုက်တယ်... (စာကောင်းလေးတွေရေးနိုင်တာအားကျတယ်အမချစ်ရယ်)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Nov 29, 03:37:00 PM GMT+8
ထားရဲ့ အလှူကို ပုဝါလှလှလေးခြုံပြီးတက်ခွင့်ရဖို့ မကြုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်… ဝမ်းနည်းစရာပါဘဲ
ဒါပေမဲ့ ထားဟာ လူပီသပါတယ်။ လူတွေဟာ ပစ္စည်းဥစ္စာ မပိုင်ဆိုင်ခင်မှာတော့ အလှူကြီးပေးလိုက်မယ် ဘာညာ ကြွေးကြော်နိုင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းရလာရင် ကိုယ့်ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်အောင် ဖြည့်ဖို့က ပိုအရေးကြီးသွားတတ်ကြတာ… ကိုယ်တိုင်လည်း ထားနေရာရောက်ခဲ့ရင် ထားလိုပဲ ဖြစ်မိတယ် ထင်ပါတယ်။
လူ့စရိုက်ကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဖော်တာ သိပ်တော်တဲ့ အစ်မချစ်
NSA Sat Nov 30, 06:40:00 AM GMT+8
အလှူကြီးမလှူဖြစ်သေးလဲ အားလုံးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ တစ်နေရာစီနေကြရတာပဲ ကျေနပ်စရာပါပဲ။
Unknown Sat Nov 30, 02:38:00 PM GMT+8
တကယ် ပြင်ပဝန်းကျင်မှာ ဖြစ် ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆရာမက ပြေပြစ်စွာ ထောင့် စေ့ရေးပြသွားတာကို အးကျမိပါတယ်။
Unknown Sat Nov 30, 02:39:00 PM GMT+8
အမ်တီအန် Tue Dec 03, 03:41:00 PM GMT+8
ထားရဲ့ စိတ်လေးကို အဆုံးသတ်မှာ သဘာဝကျကျ လှည့်လိုက်တာ သဘောကျမိတယ် အစ်မရေ..